वामदेव गौतमको गीत ‘यो बुद्ध भूमि’
Thu, Oct 1, 2020 at 6:41am
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सहयोग पु-याउन राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान #आहा खबर# यस्तो रहेको छ विहीबारको तपाईको भाग्य, असोज १५ गते #आहा खबर# कर्णालीमा थपिए ५७ सङ्क्रमित, ३४ घर फिर्ता #आहा खबर# प्रधानसेनापति थापाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ #आहा खबर# बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमित महिलाको मृत्यु #आहा खबर# आइपिएलः राजस्थानले टस जितेर कोलकताविरुद्ध फिल्डिङ रोज्यो #आहा खबर# सर्लाहीका उखु किसानले पाउने भए भुक्तानी #आहा खबर# प्रेस काउन्सिलको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने #आहा खबर# मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरद्वारा सशुल्क पिसिआर परीक्षण सेवा सुरु #आहा खबर# धनुषाका शक्तिपीठमा बडादशैँको बेला भीडभाडका क्रियाकलाप र बोकाबलि निषेध #आहा खबर# मनसुन बाहिरिन अझै एक हप्ता लाग्ने #आहा खबर# कोरोना महामारीको असरः डिज्नेले दुई राज्यबाट २८ हजार कामदार हटाउने #आहा खबर# केमा केन्द्रित रह्यो ट्रम्प र वाइडेनको पहिलो प्रत्यक्ष बहस ? #आहा खबर# विराटनगरबाट आईपीएलको सट्टाबाजीमा संलग्‍न ३ जना पक्राउ #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा आज कहाँ कति संक्रमित थपिए ? यस्ताे छ विवरण #आहा खबर#
शुक्रबार, १२ भाद्र २०७७,	आहाखबर	1.29K
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राजनीतिसँगै लेखनमा उतिकै रुचि राख्छन्। फुर्सदका समयमा राष्ट्रियभावले ओतप्रोत गीत लेख्ने गरेका उनले पछिल्लोपटक शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको भूमि नेपाललाई ‘यो मुक्त भूमि हो, बुद्ध भूमि’ बोलको गीत रचना गरेका छन्।
कोभिड– १९ का कारण यो ‘बुद्ध भूमि’ नामक गीत आज भर्चुअलरुपमा सार्वजनिक भएको छ। गौतमको गीतमा शम्भुजीत बाँस्कोटाको सङ्गीत र रोशनराज गुरुङ, माण्डवी त्रिपाठी, अञ्जना गुरुङलगायतको स्वर रहेको छ। गीतको प्रस्तुतकर्ता हरिशदेव गौतम र छायाङ्कन दीर्घ गुरुङ छन्। गीतमा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता, शान्तिका दूत गौतम बुद्ध र नेपाली कलासंस्कृतिका बारेमा वर्णन गरिएको छ। आम नेपालीलाई गीतले एकतामा रहन र देशप्रति प्रेरित हुन प्रेरणा मिल्ने विश्वास नेता गौतमको छ।
उपाध्यक्ष गौतमले अहिलेसम्म ४३ गीत रचना गरिसकेका छन्। उनले आफ्ना ती गीतलाई सङ्कलन गरी गीतिसङ्ग्रह ‘मेरो गीतियात्रा’ पनि प्रकाशनमा ल्याएका छन्। उनका ती गीत राष्ट्रियभावले भरिएका छन्। त्यसलगायत कला, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि पनि उनका गीतले सन्देश दिएका छन्।
'जनआन्दोलनपछि परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त राष्ट्रिय गीतको विकल्प खोजियो। नयाँ राष्ट्रिय गान चयनका निम्ति खुला प्रतिष्पर्धाका लागि आह्वान भयो,' उनले भने, “मैले पनि आफूले रचना गरेको गीत पठाएँ तर उक्त गीत उत्कृष्ट सातभित्र पनि परेन। त्यही गीत मेरो गीतियात्राको प्रारम्भ बन्न पुग्यो।' त्यसो त उनी आफू जीवनको प्रारम्भकालदेखि नै छन्द कविता र गीति लेखनमा रुचि रहेको बताउँछन्। विद्यालयस्तरदेखि नै गीत सङ्गीत र कवितामा रुचि राखेको बताउने गौतमले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो चाहना पूरा भएको बताउँछन्।
'विद्यालयमा प्रत्येक शुक्रबार आयोजना हुने साहित्यिक कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा मेरो सहभागिता हुने गरेको थियो,' उनी भन्छन्, 'तर त्यसबेला मैले के र कस्ता विषयमा कविता लेखेँ वा वाचन गरेँ, त्यसबारे कुनै सम्झना छैन।'
शाहरुख र दीपिकाका फ्यानका लागि खुशीकाे खबर, फेरि एकसाथ फिल्ममा देखिँदै
इतिहासकै सबैभन्दा महंगो फिल्म बन्नेभयो ‘टाइगर-३, विश्वका ७ देशमा शुटिङ
सञ्जयको 'सडक-२' को ट्रेलरमा लाइक भन्दा डिसलाइक बढी
‘छक्का पन्जा ४’ का लागि ३ करोड भन्दा बढी खर्च गर्दै दिपकराज गिरी
दिवंगत अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूतको अन्तिम चलचित्र ‘दिल बेचारा’ आज रिलिज हुँदै